सरकारको यो हदसम्मको कार्य हुँदा कोही चुप लागेर बस्नुहुँदैन : डा. शेखर कोइराला – Sudarshan Khabar
सरकारको यो हदसम्मको कार्य हुँदा कोही चुप लागेर बस्नुहुँदैन : डा. शेखर कोइराला
काठमाडौं : आर्थिक घोटालासम्बन्धी चर्काे विवादपछि सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई)सँगको स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गरेको छ। यससँगै बिहीबारै नयाँ प्रक्रिया थालनी गरिने भएको छ।
विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले तीन चरणमा औषधि र मेडिकल उपकरण ल्याउने सम्झौता ओम्नीले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन्।
‘सम्झौताअनुसार निश्चित समयमा उहाँ (ओम्नी समूह)हरूले हामीले जति भनेका थियौं त्यसअनुसारको सामग्री ल्याउन सक्नुभएन।
मार्च ३० तारिख (चैत १७)भित्र ल्याउनुपर्ने जति सामग्री थियो त्यो अवधिभित्र कबुल गरेको १० प्रतिशतको हाराहारीमा सामग्री ल्याउनुभयो। कुल कबोलको पैसाको १८ प्रतिशतको मात्र सामान ल्याउनुभयो’, महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि दोस्रो लटको उहाँहरूले बिहीबार (अप्रिल २)मा ल्याउनुपर्ने थियो।
त्यो ल्याउने कुनै सम्भावना देखिएन, ल्याउन सक्छौं भन्ने कुनै प्रतिबद्धता पनि रहेन।’ त्यसैले सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भएको उनले बताए।
उनले महामारी आए मात्र प्रयोग गर्ने गरी त्यस्तो किट ७५ हजार थान किनिएको बताए। ‘त्यो हामीले ७५ हजार किट किनेका छौं। त्यो हामी प्रयोग गर्दैनौं। हामीमा महामारी नहोस्। कथंकदाचित भोलिका दिनमा महामारी भयो, ५ सयभन्दा बढी बिरामी भए तुरुन्तै त्यो टेस्ट गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यस्तो बेला पीसीआर परीक्षण गर्न सक्दैनौं। त्यस्तो बेला परीक्षण गर्ने गरी ल्याइएको हो।’